सुरक्षामा खटिएरै बित्छ फौजीको दसैं
नेपाल लाइभ मंगलबार, असोज २१, २०७६, १८:००
पियारीले हरेक महिना चिठ्ठी पठाउँथिन्
यसपालिको दसैंमा त घर आउ भन्थिन्
लालाबाला हरेक साँझ बाटो हेर्छन् अरे
थुम्थुम्याउँछु भन्थिन् उनी, आउँछन् भनी भरे
भन्नेलाई भन्दिए भो बिर्स घरबार
फौजीलाई कुन हो, दसैं कुन चाड तिहार
फौजी जीवनको दसैं तिहार बुझ्न जगदीश समालले गायकको यो गीत नै काफी छ। सबैलाई चाड मनाउन भ्याइनभ्याइ छ। वर्ष दिनभरिका दुःख भुलेर दसैं मनाउन घर फर्कनेको लर्को नै लागेको छ। विविध कारणले घर जान नपाएकाहरू भने काठमाडौंमै दसैं मनाउने योजनामा छन्।
वर्षभरिका दुःख भुलेर आफन्तसँग मनाउन पाउनेका लागि दसैं राम्रै होला। तर, झन्डै तीन करोड नागरिकलाई शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीको दसैं भने जगदीश समालले गायको गीत जस्तै छ।
यसबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलले गायक समालको शब्दलाई समर्थन गर्दै भन्छन्, ‘बडादसैंमा आम नागरिक दसैंको उत्सव मनाउन आ–आफ्नो परिवार, आफन्तकोमा जम्मा हुने गर्छन्।
आवत–जावत पनि हुन्छ। रमाइलो साटासाट गर्ने र भेटघाटमा व्यस्त हुन्छन्। खुसी मनाउने गर्छन्। यही मौकामा विभिन्न किसिमका अपराधका घटना पनि हुने गर्छन्। चोरी, लुटपाट, लागू औषध प्रयोग बढ्ने, जाँडरक्सी खाएर होहल्ला, झैझगडा, कर्तव्य ज्यानका घटनाहरू हुने गर्छन्। यस्ता अप्रिय घटना हुन नपाओस् भनेर आम नागरिक रमाइलो गरिरहेका बेला उनीहरूकै सुरक्षा गर्दैमा हामी प्रहरीको दसैं बित्छ।’
नागरिकको सुरक्षाकै लागि भनेर ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दसैं लक्षित सुरक्षा योजना पनि बनाउँदै आएको छ। सोही अनुसार दसैंमा ठूलो मात्रामा प्रहरी खटिने गरेका छन्।
यसबारे प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले बडादसैंको पूर्व सन्ध्यादेखि नै सबै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा योजना बनाएका हुन्छौं। सोही अनुसार अति जरुरी बाहेकका सबै बिदा कटौती गरेर प्रहरी कर्मचारीलाई ड्युटीमा खटाउँछौं। साँच्चै भन्ने हो भने प्रहरीको दसैं ड्युटीमै बित्छ।’
अति जुरुरी र जो आफ्नो कार्यालय नजिकै बस्छन्, उनीहरू केही घण्टा आउट गएर टिका थाप्न पाउने अवस्था छ भने उनीहरू बाहेक अन्यको बिदा कटौती गरेर अधिकांश प्रहरी ड्युटीमा खटिएर दसैंमा विशेष सुरक्षा दिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
बिदा नै बसेर दसैं मनाउँदा पनि ढुक्क हुने अवस्था नआउने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी होबिन्द्र बोगटी बताउँँछन्। धेरै जसो ले बिदा नै पाउँदैनन्। बिदा पाएर बसेकाहरूले ढुक्क भएर दसैं मनाउने अवस्था रहँदैन। ‘कहाँ कतिखेर के हुन्छ, थाहौ हुँदैन,’ डिएसपी बोगटी भन्छन्, ‘घटना भएपछि मेरो बिदा छ भनेर बस्ने कुरा पनि भएन।’
चाडपर्वकै लागि भनेर देशभर हरेक दिन ३५ हजार प्रहरी खटिँदै आएका छन्। त्यसैगरी नियमित पुलिसिङ, विभिन्न कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा, कारागार सुरक्षा, विमानस्थल, महत्वपूर्ण ठाउँ तथा भिआइपीहरूको सुरक्षा र ब्यारेकको सुरक्षामा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी खटिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा दसैंको बेला धेरै प्रहरीले बिदा पाउने अवस्था हुँदैन।
यसरी बिदा नपाएका प्रहरीले चाहिँ कसरी मनाउँछन् त दसैं? यसरी सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीले दसैं कसरी मनाउलान् त? यसबारे एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘चाडपर्व, मेला, महोत्सवमा सुरक्षार्थ खेटिने हाम्रो काम र कतव्र्य हो। सबै नागरिक रमाइलोमा भुलिरहँदा हामीले रमाइलोलाई बिर्सेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य नागरिक जसरी हामी पनि एक रात मासु खाएर रमाइलोमा भुल्यौं भने के हुन्छ? तर हामी त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं, नागरिककै सुरक्षार्थ चाड नभनी खटिन्छौं, यही नै हाम्रो चाड हो।’
यसरी ब्यारेकै दसैं मनाउने प्रहरीको पनि आफ्नै प्रचलन छ। जसमा घटस्थापनाको दिने देशभरीकै जिल्ला प्रहरी कार्यायल र सो भन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जमरा राखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि १ नम्बर गणमा जमरा राखिसकेको छ।
प्रहरीले अष्टमीको दिन जमराको पूजा गर्छ। नवमीको दिन मौला पूजा गरिन्छ। जहाँ बली दिने चलन छ। दसैंमा घर जान नपाएका प्रहरीले दशमीको दिन कार्यालय प्रमुखबाट टीका लगाउने चलन छ। एकादशीको दिन आइजिपीको हातबाट टीका थाप्ने चलन छ। यो बाध्यकारी नभए पनि एउटा चलनको रुपमा स्थापित नै भइसकेको छ।
नागरिक आफन्त तथा परिवारका सदस्यसँग रमाइलो मानेर चाड मानिरहेका बेला प्रहरी भने उनीहरूकै सुरक्षार्थ खटिएका हुन्छन्। सबै नागरिकले दसैंतिहार रमाइलोसँग मनाएजस्तै प्रहरीलाई पनि त्यसैगरी मनाउने रहर भने नभएको होइन।
तर, चाडमा अपराध बढी हुने भएकाले धेरै प्रहरी घर जान पाउँदैनन्। ब्यारेकलाई नै घर सम्झेर दसैं बनाउने गर्छन्। ब्यारेकमै बडाभोज खाने, सांस्कृतिक कार्यक्रममा रमाउने, आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीबाट टीका लगाएर आर्शिवाद थाप्ने गरिन्छ।
दसैंसँगै प्रहरीलाई मासुको चिन्ता
हरेक वर्ष दसैं नजिकिएसँगै प्रहरीलाई एउटा कुराको चिन्ता हुने गर्छ, मासु। दसैंमा प्रहरीलाई मासु खुवाउनु पर्ने तर मासुको लागि भनेर छुट्टै रासन नआउने भएकाले प्रहरीलाई दसैंको लागि मासुको जोहो गर्ने चिन्ता भएको हो। हप्ताको दुई पटक मासु आउने तर दसैंमा फूलपातीको दिनदेखि पूर्णिमासम्म दिनैपिच्छे मासु खुवाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि कतिपय प्रहरी कार्यालयले रकम उठाएर मासुको जोहो गर्ने गरेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘दसैंका लागि भनेर छुट्टै रासन आउँदैन। दसैंमा दैनिक मासु खुवाउनुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्था प्रहरी कार्यालय आफैंले गर्छन्।’
दसैंका लागि मासु जोहो गर्दै कतिपय प्रहरी कार्यालयले १५–२० दिन अगाडिदेखि नै मेसमा मासु पकाउन छाड्ने गरेका छन्। सल्लाह गरेर नै दसैंका लागि मासु सञ्चित गर्नका लागि मासुबिनाको खान खाने गरिन्छ। कतिपय प्रहरी कार्यालयले पैसा उठाएर खसी किन्ने गर्छन्।
कतिपय प्रहरी कार्यालयमा भने हाकिमले नै मासुको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। कार्यालयमा आएको बजेटको केही अंशबाट पनि खसी किनेर मासु खुवाउने चलन रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।